ဥရောပ၌ကျော်ကြားရုံဥရောပယဉ်ကျေးမှု၏ထည်သို့ယက်နေကြ. ဥရောပ၌နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ရုံသင်သည်ထူးခြားသောတင်ဆက်မှုကတိပေး. ဒါဟာနှိုးဆော်သင်ချန်ထားမည်, ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်, နှင့် spellbound! အနုပညာဖျော်ဖြေ၏သဘောသဘာဝ spectacularly ခဏနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုယ်ကဖြစ်ပါတယ်. ထက်မြက်၏ဤအတောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တရများအတွက်သာအသက်ရှင်. ဥရောပ၌နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ရုံသီးသန့်နှင့်ရှားပါးတစ်သဘောမျိုးဖန်တီး. ဒါဟာခွဲဝေမှုကာလ၌အကျဉ်းအခိုက်ဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သသည်၎င်း၏အလင်းရောင်၏အလငျး၌လှုံချင်ပါလိမ့်မယ်.
အများစုကအတိတ်၏အကြီးအအဆိုတော်တွေ၏, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ရာနှစ်ကျော်, ဤနေရာတွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြ. အတော်များများကကျော်ကြားသရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းထိုကဲ့သို့သောအျောသဲအဖြစ်ကဒီမှာသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်မှုခဲ့ကြ, Verdi အားဖြင့် Nabucco, Giacomo Puccini မှ Madame လိပ်ပြာ.
အဆိုပါကမ္ဘာလုံးပြဇာတ်ရုံရှိတ်စပီးယားကမ္ဘာလုံးအဖြစ်လူသိများသည်. အဆိုပါ Bard ၏ Insatiable ပရိတ်သတ်တွေဥရောပ၌ဤကျော်ကြားပြဇာတ်ရုံသို့သွားရောက်ရမည်ဖြစ်သည်. ဝီလျံရှိတ်စပီးယားရဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သောလူ့သဘောသဘာဝတစ်နက်ရှိုင်းသောနားလည်မှုကိုပြသ. သူ့အလုပ်သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောပရိသတ်များအတွက်. အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာကသူ့ပြဇာတ် လုပ်. ပါရမီ၏ timeless အပိုင်းပိုင်း poems ထားပါတယ်.
အဆိုပါ Paradis လက်တင်ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်ပါတယ် လာမယ့် cabaret ၎င်းသည်မူလလက်တင်ပြဇာတ်ရုံ၏ဆက်ခံသူဖြစ်သည်. လက်တင်ပြဇာတ်ရုံဟာ 1800 ခုနှစ်နပိုလီယံဘိုနာထက်အခြားအဘယ်သူမျှအားဖြင့်မူလကတာဝန်ခဲ့သည်.
ဗီယင်နာအတွက် Volkstheater တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လှပသောမျက်မှောက် ကှ္ဂျကှ္ဂျမှ. ပထမဦးဆုံး၌ဖွင့်လှစ် 1889. ၎င်းသည်ဂျာမန်စကားပြောသောနိုင်ငံများအတွင်းကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပမှာတော့နာမည်ကြီးရုံ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-theatres-europe%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)